Qoys Somali ah oo booliska Norway ay dhibaateeyeen oo 24 saac ku taajiray - Caasimada Online
Home Warar Qoys Somali ah oo booliska Norway ay dhibaateeyeen oo 24 saac ku...
Qoys Somali ah oo booliska Norway ay dhibaateeyeen oo 24 saac ku taajiray
Oslo (Caasimadda Online) – Maxamed Jaamac waa aabe Soomaaliyeed oo isaga iyo qoyskiisa ay ku nool yahiin magaalada Oslo ee dalak Norway, muddo 24 saac ayuuna ku taajiray kadib markii lacago looga aruuriyay Internet-ka.
Qoyskaan waxey daganayaan guryaha ay maamulanaa dowladda Hoose, gaar ahaan degmada Toyen eek u yaalla Caasimadda, ayaa la kulmay dhibaato kaga timid dowladda Hoose kadib markii dhaqaalaha bishii lasoo dhaafay uu gaaray darajadii guriga looga saari lahaa.
Dowladda Hoose wey ku gacan seyrtay cabashadii aabaha Soomaaliyeed, waxeyna go’aan ku gaareen in loo diro Boolis si guriga looga saaro, waxaana banaanka loo soo saaray qoyskii xilli uu jiro qabow aad u daran.
Booliska waxey ku qanciyeen qoyska iney heystaan amar dowladeed, isla markaana aysan waxba ka badali karin, waxeyna qoyska usoo bandhigeen iney raacaan oo ay intii habeenkaas ah seexdaan goobaha la seexiyo dadka wadooyinka laga qaado ee sarqadda ka badato ama isticmaalaha maandooriye xad dhaaf ah.
Gabar aan magaceeda la faafin balse reer Norway ah oo daris la aheyd qoyska ayaa dhibaatada qoyska iyo waxa ay ka ogtahay xaaladda ku faafisay baraha bulshada, taasna waxey keentay in dowladda Hoose ay la kulanto dhaleeceyn shacabka kaga timaada, ilaa laga codsado iney iska casilaan xilka.
Gabadha waxey dadka reer Norway ka dalbatay in qoyskaan laga bixiyo lacagta dibaajiga ah ee guryaha kirada la isaga qaado oo dhan 50,000 Karoon, balse ay saacad gudaheed dadka ku bixiyeen, waxeyna ku qasbanaatay iney badasho mowduuca sheekada ilaa ay gaarsiiso in loo iibiyo guri.